Nakuba Blu-ray eqala ukuba kwande namuhla. DVD namanje alawula emakethe. Futhi i-software DVD Ripper kwakuyoba uyisidingo isicelo abathandi DVD. Ungakwazi ukukopisha okuqukethwe DVD ukuze ifayela video by Ukufaka ikhodi DVD in MP4, AVI, Mkv, Ukudla, WMV noma ezinye ifomethi. Ifayela waklebhula kungaba nisindiswe kwikhompyutha noma enye idivayisi, like umakhalekhukhwini ne tablet, for ukuhlela okunye, isipele, ukwabelana noma ukudlala.
Indlela ukudlulisa DVD Movies ukuba Samsung Galaxy S5 / 4/3 Series For Free
Indlela Ukuguqula a DVD ukuze MP4 Ifomethi
Posted on May 31, 2016 August 8, 2016 Umbhali WillIzigaba UkubuyekezaTags best free DVD Ripper, DVD Ripper freeware, free DVD Ripper, software DVD khulula Ripper, okuyinto khulula DVD Ripper iyona engcono kunazo
Langaphambilini post Previous: Indlela Phinda Imilayezo esusiwe kusukela Samsung Galaxy S5 / S6